We Should Pyan-Lun-Daw-Mu Again!!! | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Magicians’ Hands
eBook – Burma and Ethnic Rohingyas →
We Should Pyan-Lun-Daw-Mu Again!!!
ငါတို့ ၂ ခါပြန်တောင် ပျံလွန်တော်မူချင်တယ်
ကျော်ဟိန်းက ရဟန်း ဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ မဝတ်ခင်ကတည်းက တရားပွဲတွေ လက်ခံပါသတဲ့။ လူမင်းက လသား သမီးကလေးကို သီလရှင် ဝတ်ပေးပါသတဲ့။ ဒါဟာ မြန်မာပြည် ဘာသာရေးမှာ အနုတ် လက္ခဏာတွေပါ။
ရဟန်းဝတ်ပြီးရင် ငါးဝါတိုင်အောင် ဥပဇ္စျယ်ဆရာအနီးမှာ နေရပါတယ်။ သင်္ကန်းပတ်ပြီးတာနဲ့ သာသနာပြုတော့မယ်ဆိုပြီး သောက်ရမ်း လျှောက်လုပ်လို့ မရပါဘူး။ အနီးနေဆရာရဟန်း (ဆရာရဟန်း မအားရင် Assign လုပ်ပေး၊ အပ်ပေးတဲ့ ရဟန်းတော်) ထံပါးမှာ နေပြီး အနည်းဆုံးအားဖြင့် ရဟန်းစည်းကမ်းဖြစ်တဲ့ ဝိနည်းကိုလေ့လာရပါတယ်။
ခေါင်းမှာ ဒက်ဗရပွပေါက်လာတဲ့ ကိုရင် ပေါက်စနကနေ ရဟန်းဖြစ်လာတဲ့ ငယ်ဖြူတွေတောင် တရားပွဲ ရင်ဆိုင်ဟောဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှသေးပါဘူး။ ကျော်ဟိန်းဆိုတဲ့ သီချင်း၊ သူသရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကား၊ သူဒါရိုက်တာ လုပ်တဲ့ကားတွေ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးမှာ စတန့် လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကုသိုလ်မရဘဲ အကုသိုလ်ပဲ သေချာပေါက်ရမှာပါ။ တကယ့် သံဃာလောကက ဒါမျိုးတွေ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူမင်းက စတန့်လုပ်ပြန်တာက ရက် ၁၀၀ သား ကလေးပေါက်စနကို သီလရှင် ဝတ်ပေးတယ်။ သီလပေးတာတောင် လိုက်မဆိုနိုင်သေးတာ ဘယ့်နှယ်လုပ် သီလရှင် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ။ သီလရှင် ဝတ်စုံ ပတ်ပေးတာလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ သာမဏေ ဝတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးအားဖြင့် ကိုယ့်ဆွမ်းကို ကျီးမထိုးအောင် ခြောက်နိုင်တဲ့ အရွယ်၊ သင်္ကန်းကို နိုင်တဲ့ အရွယ် ဖြစ်ရမယ်လို့ ဘုရားက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဝတ်ပေးတဲ့ ကိုယ်တော်ကို သံဃမဟာနာယ အဖွဲ့တို့၊ ဝိနည်းဓိုရ် အဖွဲ့တို့က ဘာမှ မပြောဘူးလား မသိပါ။ (နှာစေးတော်မူကြထင့်။)
ကံဆောင်တာ၊ ဘုန်းကြီး နိုင်ငံရေးပြော သာသနာ ပျက်စီးကြောင်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထောင်ထဲရောက် မဲဇာရောက် ဖြစ်ရပါတယ်။ ခုနလို သာသနာမှာ ထင်ရာလုပ်တာကျတော့ ဘာသံမှ မထွက်ကြပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာကမှ သာသနာ သေချာပေါက် ကျဆင်းတော့မှာပါ။
ဆရာတော် ဦးဗုဓ်တို့၊ လယ်တီဆရာတော်တို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်တို့များ ဒါတွေ သိရ ကြားရတော်မူရင်တော့ဖြင့် ငါတို့ ၂ ခါပြန်တောင် ပျံလွန်တော်မူချင်တယ်လို့ ငြီးငြူတော်မူကြမှာကတော့ မြင်ယောင်မိပါသေး။
4 responses to “We Should Pyan-Lun-Daw-Mu Again!!!”
ဆရာတော်တွေ ဘာမှမပြောတာလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူ မှန်တယ်..(ထင်တယ်)
ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕ .. တကယ့္ကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ပါပဲ..။စတန္႔ထြင္ခ်င္ရင္လည္း ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ထြင္ၾကပါ…။ သာသနာထဲေတာ့ ၀င္မထြင္ၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာေပးၾကပါ…။ 😦
ဘယ္သူမွားၿပီး ဘယ္သူမွန္လဲဆိုတာ ကာယကံရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လူက ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းမွန္ကို တင္ျပလည္း သူတို႔ မွန္ေအာင္ ေလွ်ာက္မွ မွန္ၾကမွာပါ…..
ဟုတ္တယ္ ကိ္ုသင္ကာ သာသနာကြယ္ေတာ႔မယ္႔ အရိပ္လကၡာဏာေတြပဲဗ်ာ။